Da'da Da'da 19 - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Raadi Qorshe > Qorshaha Caafimaadka Apple > U-qalmitaanka Caafimaadka Apple ee CHPW > Da'da 19 jirka
Caymiska Apple Health ee qoyskaaga wuu is beddeli karaa marka ilmahaagu ama ku -tiirsanahaagu noqdo 19 jir.
Waxaad isbeddel ku samayn kartaa caymiska Apple Health ee qoyskaaga marka ilmahaaga ama qofka kugu tiirsan uu gaaro 19 sano. Waxaad ka heli kartaa farriin Washington Healthplanfinder oo ku saabsan inay lumiyaan caymiskii. Laakiin waxay ku xidhan tahay xaaladda qoyskaaga, fursadahaaga dhabta ahi way ka duwanaan karaan.
Sida qorshahaaga caafimaad, annaga oo ah Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) ayaa kaa caawin kara inaad hesho caymiska caafimaad ee ku habboon qoyskaaga.
NA WAC: 1-833-969-0307
Waa kuwan su'aalo la isweydiiyo marka xubin qoyskaaga ka tirsan uu gaaro 19:
Ilmahaygu ma inuu ku sii jiraa qorshahayga caafimaad? Waxay samayn karaan tan haddii ay ku nool yihiin gurigaaga oo aad u sheeganayso inay ku tiirsan yihiin canshuurahaaga.
Ilmahaygu ma rabaa qorshahooda caafimaad? 19 jir wuxuu samayn karaa kaligiis Koontada Healthplanfinder Washington oo dooro qorshe.
Miyaan ku cusboonaysiiyaa caymiskayga Washington Healthplanfinder? Waxaad u baahan kartaa inaad tan samayso si aad u hubiso inaad haysato caymiska aad rabto. Qorshayaasha adiga iyo ilmahaagu heli kartaan waxay ku xiran yihiin u -qalmitaanka dakhliga labadiinaba. Eeg shuruudaha u -qalmitaanka Apple Health*.
Apple Health ee shaqsiyaadka qaangaarka ah (da'da 19-24)
Waad u qalmi kartaa haddii aad:
Waa Da'da 19-64
Hayso dakhli sanadle ah oo qoyskaaga ah kana hooseeya heerka Medicaid (kafiiri shaxda dakhliga hoose) *
Aad tahay muwaadin Mareykan ah ama aad buuxisay shuruudaha socdaalka ee Medicaid.
Xaq uma laha Medicare
Apple Health for Adults (da'da 19 ilaa 64 sano)
Shuruudaha U Qalmitaanka Dakhliga
Tirada Reerka Qof keli ah 2-qof 3-qof 4-qof 5-qof 6-qof 7-qof
Dakhliga bishii $ 1,482 $ 2,004 $ 2,526 $ 3,048 $ 3,570 $ 4,092 $ 4,614
Ma leedahay su'aalo? Naga soo wac 1-833-969-0307.
*Shuruudaha dakhliga waa la cusbooneysiiyaa Abriil kasta
Haddii ilmahaaga/ku -tiirsanahaagu rabo inuu raaco qorshahooda
Haddii ilmahaagu ka baxayo qorshahaaga, waxay u baahan doonaan inay iyagu iskood u sameeyaan Koontada Healthplanfinder Washington. Tani waxay leedahay laba tallaabo:
Waxaad ku cusboonaysiinaysaa caymiskaaga caafimaadka Washington Healthplanfinder. Markaad sidaas samayso, cusboonaysii macluumaadka qoyskaaga si aad u muujiso in ilmahaaga 19 jirka ahi aanu ku jirin qorshahaaga.
Ilmahaagu wuxuu sameeyaa koonto Healthplanfinder Washington. Waxay u baahan yihiin in laga saaro qorshahaaga ka hor inta aysan tan samayn. Marka ilmahaaga ama qofka kugu tiirsan uu abuuro koonto Healthplanfinder Washington, waxay isku qori karaan qorshaha CHPW iyaga u gaar ah.
Haddii ilmahaaga/qofka kugu tiirsan uu ku sii jiro qorshahaaga
Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay in ilmahaagu ku sii jiro qorshahaaga caafimaad. Waxay tan samayn karaan ilaa da'da 26, inta ay ku nool yihiin gurigaaga oo aad u sheeganaysid inay ku tiirsan yihiin canshuurahaaga.
Si aad u ilaaliso ilmahaaga 19 jirka ah ama ku tiirsan qorshahaaga, ku cusboonaysii caymiskaaga onleenka Washington Healthplanfinder.
Naga soo wac si aan u sahamino fursadahaaga
Khabiirada diiwaangelinta maxalliga ah ee CHPW ayaa adiga iyo/ama ku -tiirsanahaaga ku dhex maraya habkan. Waan ku caawin karnaa:
Hagaaji xulashooyinkaaga oo hel caymiska caafimaad ee saxda ah ee qoyskaaga
Cusboonaysii macluumaadka qoyskaaga si aad ugu darto wax kasta oo ka mid ah xubnaha qoyskaaga, kana saar dadka aan hadda u qalmin
Samee koonto cusub Healthplanfinder Washington
Hubi Washington Healthplanfinder inay kugu hayso qorshahaaga CHPW
Naga soo wac 1-833-969-0307 (TTY: 711), 8:00 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo, Isniin ilaa Jimce.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Ogast 4, 2021